Dọkịta, Ogwu, Insurance | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Doctors, Clinics, Insurance
Ahụhụ mgbe urination mgbe ọrịa strok gasịrị
Mgbu mgbe urinating mgbe a na-eyiri ndị nwoke ejide gị ka na-ejikọta na njedebe nke onye ahụ. Iji na-emeso ya dị mkpa. Na ngwa ngwa, nke ka mma. Anisolus mgbe Ketorol. Ọ bụ otú ahụ. Nke a bụ nke mbụ m ...
echocardiography na dopplerography nke obi Gini bu ihe di iche?
echocardiography na dopplerography nke obi Gini bu ihe di iche? Ihe omimi bu otu n'ime usoro a kachasi achoputa atherosclerosis nke ogwu. A na-ejikarị eme ihe iji chọpụta ihe kpatara isi ọwụwa, dizziness, fainting ....
Kedu ihe bụ ọrịa na-adịghị ala ala na ọ ga-ekwe omume izere ya?
Gịnị bụ ọrịa na-adịghị ala ala, ọ ga - ekwe omume izere ya? Ma ọrịa na-adịghị ala ala, ma ọ bụ ọnwụ sitere na ha enweghị ike izere ... Ọ nweghị onye nwere ike ịgbapụ. Maka ndụ gị zuru oke ị nwere ike ime otu akụkụ ...
ụmụ agbọghọ, na nyocha maka microflora, mkpụrụ ikpu kpatara: A chọpụtaghị Microflora. gwa m ihe ọ pụtara.
ụmụ agbọghọ, na nyocha maka microflora, mkpụrụ ikpu kpatara: A chọpụtaghị Microflora. gwa m ihe ọ pụtara. ọ dịghị ihe dị mma. a dysbacteriosis. Ohia kwesịrị ịbụ. na leukocytes kwa. Enweghị microflora bụ ihe ngosi BAD. Ebe dị nsọ ekwesịghị ịbụ ...
Gwa m, biko, olee otú dentists si ewepụ tartar? Kedu ihe ọ na - ewe na oge ole ọ na - ewe? Ọ na-egbu mgbu?
Gwa m, biko, olee otú dentists si ewepụ tartar? Kedu ihe ọ na - ewe na oge ole ọ na - ewe? Ọ na-egbu mgbu? atụla egwu. Ihe niile ga-abanye. a jackhammer)))) karịa mma laser. Ha anaghị afụ ụfụ ... m chọrọ ...
Ajụjụ banyere gynecology. Kedu ụdị anụ ahụ na-acha odo odo?
Ajụjụ banyere gynecology. Kedu ụdị anụ ahụ na-acha odo odo? Ị nwere ike ịgụ banyere ya ebe a! Sun nwere nkọwa zuru ezu nke anyanwụ! Yellow body The corpus luteum (Latin corpus luteum) bụ akpụkpọ anụ nke dị n'ime ...
Ebee ka ewepu moles na Moscow? Aha, adreesị, ma ọ bụrụ na ọ dị - kọntaktị. Daalụ tupu!
Ebee ka ewepu moles na Moscow? Aha, adreesị, ma ọ bụrụ na ọ dị - kọntaktị. Daalụ tupu! Tupu i wepụ nevi (ntụpọ ojii n'ahụ), ịkwesịrị ịkpọ dọkịta mgbe niile. Nke a bu dibia akpukpo ogwu - oncologist. Anakwere na anụ ahụ venereologic XensX, ...
Biko ị nwere ike ịgwa m ebe m ga-aga na Krasnoyarsk?
Biko ị nwere ike ịgwa m ebe m ga-aga na Krasnoyarsk? Ha kwagara, ha adighi n'ebe ahu. Fund ahụ ike na ọrịa (FSEB) Krasnoyarsk Territory surveillance, sanminimum Krasnoyarsk, semaphore, d. 413 Tel. : + 7 (391) 201-58-59 (nke kachasị dị ọcha) ...
Kedu PP ES nke onye dibia bekee họpụtara ka esi nyocha ya? : - ebe na etu esi eme nyocha a
CH P ES họpụtara ọkà mmụta obi dị ka nnyocha e mere? : - ebe na otú nnyocha e mere na-mụụrụ maka achọpụta ọrịa na nzube, na usoro nke transesophageal pacing (tees), a makwaara dị ka ndị na-abụghị invasive electrophysiological ...
Enwere m ike ị nweta ụlọ ọgwụ na polyclinic ọ bụghị n'ebe obibi?
Enwere m ike ị nweta ụlọ ọgwụ na polyclinic ọ bụghị n'ebe obibi? Ee, ma ọ bụrụ na e nwere akwụkwọ mkpuchi mkpuchi ma eleghị anya ọ bụ maka ọtụtụ polyclinics (kwere na nke a abụghị ọrụ ha) Nweta nke ahụ ...
Gịnị bụ ịwa ahụ endoscopic na olee otú o si dị iche na laparoscopy. Nkume na ureter.
Gịnị bụ ịwa ahụ endoscopic na olee otú o si dị iche na laparoscopy. Nkume na ureter. Endoscopic - kpamkpam n'enweghi nkuku ga-abụ urethroscope iji rute nkume ma gbalịa ibibi ya ... Laparoscopic bụ ugbua ...
Kedu ihe a na-emechi akara aka, akara akara?
Kedu ihe a na-emechi akara aka, akara akara? chemical siri ike site chemical ruo oge ụfọdụ na-edeghị ede oghere, ìhè dị mgbe irradiation geliolampoy chemical akara ihe tapawa na-+ tapawa siri ike onwe ya maka opredelnie ...
Gwa ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ azụ na Moscow
Nye ndụmọdụ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ nke azụ na Moscow, ọ bụrụ na ị chọrọ na-ebu ọgwụgwọ nke azụ, ihe ngwọta kasị mma ga-emetụta na Medical ghara ịgbanwe Center elk Island n'okpuru nduzi nke VI Dikul (Dikulja ọgwụ), na ...
Biko gwa ezigbo ụlọ ọgwụ na Moscow.
Biko nye gị ezigbo ụlọ ọgwụ na Moscow. Enwere otu. A na-akpọ ya "Trent South." Ọ dị na ókèala ụlọ obibi nnụnụ Blue Bird (nke a bụ Northern Butovo), n'okporo ụzọ Starokachalovskaya, 6. Nwere ike isi ebe ahụ ...
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nkwonkwo merụrụ?
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nkwonkwo merụrụ? Ọ dị mkpa ka ị na-emeso ndị dọkịta na-enyocha. Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ dị iche: site na nchịkwa nke ọrịa arthritis na arthrosis na bursitis na synovitis, rheumatism kwa ...
ke ikpe ewe ke ẹnịm okpueze ke edet?
ke ikpe ewe ke ẹnịm okpueze ke edet? E tinyere m na mpempe ọla anụ na ise nke ise (anya na ọchị) mgbe ọkara nke elu nke ezé ahụ kwụsịrị. Ha kwuru na otu akụkụ agaghị adịte aka, ọbụna ...
Ụmụ okorobịa, gwa m, Achọtara m na enyemaka mbụ kit ude Solcoseryl-site na ihe ma ọ bụ maka gịnị?
Ysmụ nwoke, gwa m, achọtara m na mmanụ ọgwụ mmanu solcoseryl, site na gịnị ka ọ bụ maka gịnị? Solcoseryl site na ọnya na-ebe ákwá. Nnukwu ihe. Ka a sịkwa ihe mere eji akpọ gel a "akpụkpọ ahụ nke abụọ" Solcoseryl - ihe na - eme ka mmanye anụ ahụ dị ọhụrụ.
Ebe mbụ di m nke cirrhosis, ALT 192, AST 214, ọnwa gara aga dị ala, àmà ahụ ga-eto ma ọ bụ nwee ike ịdata?
Ebe mbụ di m nke cirrhosis, ALT 192, AST 214, ọnwa gara aga dị ala, àmà ahụ ga-eto ma ọ bụ nwee ike ịdata? Kedu ka e si ebipụta prognosis maka imeju imeju? Emekarị prognosis maka cirrhosis ...
Gịnị bụ diureis? kedu mmamiri kwesiri ka eweputara onye ahu aru ike, gini kwa n’ime onye oria?
Gịnị bụ diureis? kedu mmamiri kwesiri ka eweputara onye ahu aru ike, gini kwa n’ime onye oria? Diureis a na-eme kwa ụbọchị (nke dị na mmamịrị) na-adabere n'ọtụtụ ihe: okike, afọ, oke ...
Gwa m ezigbo urological center na Moscow !! ATP tupu oge eruo
Gwa m ezigbo urological center na Moscow !! ATP tupu http://www.uro.ru/ Statelọ Ọrụ Federal State Institution Scientific Research Institute of Urology of Rosmedtehnologii bụ ụlọ ọrụ sayensị sayensị na-enyocha, usoro ọmụmụ na urological ọgwụ. Na ulo oru nyocha Urology bu ihe omuma di elu ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,391.